Amawindi weqembu ane-KWin | Kusuka kuLinux
KWin ngumphathi wewindi we KDE, futhi inezinketho engizivumayo ukuthi ngangingakaze ngikhathazeke ngokubona noma ukubukeza ngaphambili futhi zingasiza kakhulu, isibonelo salokhu engikubonisa sona ngezansi, okungekho lutho ngaphandle kokuhlanganisa amawindi amabili noma ngaphezulu abe munye.
Ake sizame amawindi amabili noma ama-3 uma uthanda.
Kulokhu ngivulile I-Dolphin y Konsole, kepha futhi ngivule Firefox, the Isikhungo Sosizo se-KDE y I-Virtualbox (edeskini lesibili). Kepha ngalesi sibonelo ngifuna kuphela ukuhlanganisa okubili kokuqala engikushilo (Ihlengethwa neKonsole).
Yebo, sichofoza kwesokudla kwibha yesihloko kunoma yimaphi amawindi amabili. Endabeni yami ngikwenze mayelana Konsole futhi ake siye lapho kusho khona Hambisa iwindi eqenjini.
Njengoba ukwazi ukubona, wonke amawindi engiwavulile ayaboniswa, futhi njengoba nginentshisekelo yi I-Dolphin, Ngiyayikhetha .. Futhi bheka ukuthi kwenzekani:
Empeleni, amawindi amabili ahlelwe aba munye, esingakhetha ukuthi kube ngamathebhu noma ngokujwayelekile avela kuphaneli futhi amawindi amaningi njengoba sifuna angaqoqwa. 😀
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Qoqa amawindi nge-KWin
Ngiyisebenzisa kaningi, noma ngabe angiphutha isebenza kuphela ngokuhlobisa kwewindi le-Oxygen. Ngicabanga ukuthi bekunezinhlelo zokuyinwebisela eminye imihlobiso, kepha kubukeka sengathi izinto zimile.
Ukuhudula iwindi ngokuchofoza okuphakathi kufinyelela umphumela ofanayo. Elinye iqhinga: ukuchofoza phakathi inkinobho ethi Khulisa kunwebeka kubheke phezulu kuphela.
Angikusebenzisi kakhulu lokhu kuqoqwa kodwa kuhle ngaso sonke isikhathi ukwazi amaqhinga ngokuphathwa kwedeskithophu yethu
O_O Ithiphu enkulu .. Awu, lamawindi eqoqwana ngisanda kudla ibhulakufesi hahaha. Futhi ngikuthola kuwusizo kakhulu ..
Hawu nakhu ubungitshela ocingweni ngelinye ilanga? … Mmm kuyathandeka yebo 🙂
Iminyaka ngisebenzisa i-KDE futhi manje ngiyakubona lokhu.
Hahaha, yilokho ebengikucabanga .. 😛
Elinye iqhinga elincane enilaziyo nonke kodwa bengingalazi kuze kube muva nje, futhi ngishaye ikhanda lapho ngithola .. Ukuhambisa iwindi, cindezela u-ALT bese uhambisa igundane ngaphezu kwanoma iliphi iphuzu ewindini futhi ungalishiya lapho uthanda khona , ngokushesha okukhulu, akusadingeki ngiye kubha ephezulu yefasitela ukuyihambisa ... 🙂
I-KDE ayipheli ukungimangaza. Kubukeka kungakholeki ukuthi into elula kangaka inkulu kangaka!
Woooo, bheka, bengisebenzisa i-KDE isikhashana futhi lezi zeluleko zingimangaza ngokuphelele.
Okunye futhi ukungayeki ukuncoma i-KDE
Ukulingana kweCompiz bekusebenzise eminyakeni eyedlule (kanye nekhiyubhu, amawindi afana ne-jelly ...) ukukhombisa abasebenzisi beWindows ukuthi i-Linux ibimbi kangakanani. Kepha iqiniso ukuthi angikaze ngithole la maqembu wokusetshenziswa okusebenzayo.
Ngabe umuntu ozisebenzisayo angasitshela ukuthi iziphi izinzuzo enhlanganweni noma ngejubane ezitholakalayo?
Yebo, enye nje indlela yokusebenza / ukuzihlela ngamawindi amaningi ukuze ihlale ilusizo.
Kubuntu bakho awukwazi ukukwenza?
Okunye futhi okuthakazelisayo iqhinga lokuhambisa amawindi ngokhiye we-Alt.
Inzuzo engiyitholayo ingeza umsebenzi wamathebhu kulezo zinhlelo ezingenawo. Kepha ukuhlela izinhlelo ezahlukahlukene ewindini elifanayo angizitholi izinzuzo.
Ku-Ubuntu kungenziwa ngeCompiz's Group kanye neThab Windows.
Ngizoyisebenzisa ukubona ukuthi kuyasebenza yini ...
Lokhu kuhle kimi ngoba ngivame ukusebenzisa i-firefox ne-tor manje ngishintsha phakathi kwamawindi kube sengathi yithebhu ebonga u-Elav
yuri patiño kusho
Phendula u-yuri patiño
UMir angasithinta ngezinga elingakanani?